ထိုင်းနိုင်ငံက COVID-19 ရောဂါပြန့်နှံမှု ထိန်းချုပ်ရန် အစုပြုံလိုက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု စတင် - Xinhua News Agency
ထိုင်းနိုင်ငံက COVID-19 ရောဂါပြန့်နှံမှု ထိန်းချုပ်ရန် အစုပြုံလိုက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု စတင်
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့၌ တရုတ်နိုင်ငံ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Sinovac က ထုတ်လုပ်သော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံရန် စောင့်ဆိုင်းနေသော ထိုင်းနိုင်ငံသားများအား မေ ၃၁ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဘန်ကောက် ၊ ဇွန် ၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံသည် ကူးစက်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ အဆိုးရွားဆုံး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကို ရပ်တန့်ရန် ကြိုးပမ်းသည့်အနေဖြင့် ဇွန်လတွင် အများဆုံး အကြိမ်ရေ ၆ သန်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး အစုပြုံလိုက် အစီအစဉ်ကို ဇွန် ၇ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။လူအများကြား ကိုယ်ခံအားစနစ် တည်ဆောက်နိုင်ရန် ယခုနှစ်ကုန်တွင် လူဦးရေ သန်း ၇၀ နီးပါး၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အား ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ထိုင်းနိုင်ငံက ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ် ဇွန် ၇ ရက်မှစ၍ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသည့်နေရာ ၉၈၆ ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆေးထိုးနှံရန် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော ပြည်သူများအားလုံးကို ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးသွားမည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ်ချာအိုချာက ဇွန် ၇ ရက်တွင် ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသည့် နေရာသို့ သွားရောက်စဉ် ပြောကြားခဲ့သည်။
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နောက်ဆုံး မြင့်တက်ခဲ့သော ဗဟိုချက်ဖြစ်သည့် ဘန်ကောက်မြို့၌ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား အရှိန်မြှင့်တင်ရန် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသည့် နေရာများအဖြစ် ကျန်းမာရေးဌာန နှင့် ဆေးရုံများ၏ ပြင်ပနေရာတစ်ချို့အား သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဘန်ကောက်မြို့ပြင်ပရှိ အားကစားရုံများနှင့် ဈေးဝယ်စင်တာအချို့ကိုလည်း ဒေသခံများအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသည့် နေရာများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသည့် ပထမနေ့ ပထမဆုံး နှစ်နာရီအတွင်း ပြည်သူ ၁၄၃,၀၀၀ ဦး ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၊ ယင်းမှာ ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်ရန် နိုင်ငံအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော အစပျိုးမှုဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ဖြစ်သူ Natapanu Nopakun က COVID-19 အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲရေးစင်တာ (CCSA)၏ နေ့စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသည့်နေရာတစ်ခု၌ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု ခံယူခဲ့သည့် အသက် ၅၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံ မသန်စွမ်းစက်ဘီးစီးအဖွဲ့၏ နည်းပြချုပ် Christian Stauffer က ကာကွယ်ဆေးက ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူများကို ကာကွယ်ရန် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မသန်စွမ်းစက်ဘီးစီးအဖွဲ့နည်းပြချုပ် Christian Stauffer က ဩဂုတ်လတွင် တိုကျိုမသန်စွမ်းအားကစားပွဲများ၌ ယှဉ်ပြိုင်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံ အားကစားသမားနှစ်ဦးအား ခေါ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။”ကာကွယ်ဆေးက ပြသနာရဲ့ ဖြေရှင်းချက် ဖြစ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့် လူတွေများများ ရနိုင်လေ ပိုကောင်းလေပါပဲ။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဇွန် ၆ ရက်အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ ၄ ဒသမ ၂ သန်း ထိုးနှံပြီးထားကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ဖြစ်သူ Natapanu Nopakun က ပြောကြားခဲ့သည်။
သေဆုံးမှုများ မြင့်တက်ခြင်း နှင့် အတည်ပြုလူနာ တွေ့ရှိမှုများ ခြောက်ဆခုန်တက်ခဲ့သည့် ဧပြီလတွင် စတင်ခဲ့သော ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အဆိုးရွားဆုံး မြင့်တက်လာချိန်တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု အရှိန်မြှင့်ခဲ့သည်။ဇွန် ၇ ရက်တွင် လူနာသစ် ၂,၄၁၉ ဦး နှင့် သေဆုံးသူ ၃၃ ဦး တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း CCSA ထံမှ သိရသည်။
လုံလုံလောက်လောက် နှင့် အချိန်မီကာကွယ်ဆေး ဖြန့်ဝေမှုသည် ထိုင်းနိုင်ငံ စီးပွားရေး၏ အဓိက မောင်းနှင်မှု နှစ်ခု ဖြစ်သော ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ပြန်လည်ရှင်သန်ရေး နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းပုံမှန်ပြန်လည် လည်ပတ်ရေးအတွက်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ထိုင်းနိုင်ငံ စီးပွားရေးသည် ယခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်တွင် နှစ်အလိုက် ၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Thailand starts mass inoculation to curb COVID-19 spread
BANGKOK, June7(Xinhua) — Thailand on Monday startedamass COVID-19 vaccination program with the aim to administer as many as6million shots in June amid efforts to stem its worst coronavirus outbreak since the pandemic began.
From Monday, 986 vaccination sites nationwide have opened as the country strives to vaccinate about 70 percent of its nearly 70 million population by the end of the year to build herd immunity.
All eligible people would be vaccinated, Prime Minister Prayut Chan-o-cha said when he visitedavaccination site in the capital Bangkok on Monday.
Some places outside hospitals and health institutes are designated as vaccination sites to speed up the inoculation process in Bangkok, the epicenter of the latest wave of outbreaks. Outside Bangkok, some shopping centers and sports facilities have also been designated as vaccination venues for local residents.
Within the first two hours on the first day of the roll-out, 143,000 people have been vaccinated, which is “a very good start for the country to achieve its goals,” Natapanu Nopakun, an official at the Ministry of Foreign Affairs said atadaily news briefing of the Center for the COVID-19 Situation Administration (CCSA).
The vaccine is the most effective way to protect people against the virus, said Christian Stauffer, 55, head coach of Thailand’s para-cycling team, who received the jab atavaccination site in Bangkok.
He will take two Thai athletes to compete in the Tokyo Paralympic Games in August. “Vaccine seems to be the solution of the problem. So the more people can get it and the better it will be,” he said.
As of Sunday, Thailand has administered 4.2 million doses of vaccines, Natapanu said.The accelerated vaccine rollout came amid the country’s worst wave of the outbreak that began in April, causingasixfold jump in confirmed cases andasurge in deaths. Some 2,419 new cases and 33 fatalities were reported Monday, according to the CCSA.
Adequate and timely vaccine distribution is seen asakey to reviving the tourism sector and safeguarding the manufacturing industry from infections, two main drivers of Thailand’s economy.
Thai economy contracted 2.6 percent year on year in the first quarter of this year. Enditem
1.Citizens wait to receive the COVID-19 vaccines developed by Chinese pharmaceutical company Sinovac in Bangkok, Thailand, May 31, 2021. (Xinhua/Rachen Sageamsak)
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း COVID-19 ဖြင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက် စံချိန်တင်ခဲ့ ၊ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ လျှော့ချမည်